Inkantolo imchithile uZuma ngolweziphakamiso zoMvikeli woMphakathi | News24
LAST UPDATED: 2018-11-13, 23:08
Gigaba - a flashy career gone up in flames
Inkantolo imchithile uZuma ngolweziphakamiso zoMvikeli woMphakathi
eThekwini - INkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng isichithile isicelo sikaMengameli uJacob Zuma sokuba kubuyekezwe iziphakamiso ezimbalwa zoMvikeli woMphakathi.
Lokhu kumayelana noMbiko owakhishwa wuMvikeli woMphakathi mayelana nombiko we-State Capture.
UMengameli wafaka isicelo enkantolo sokuba kubuyekezwe izigaba ezimbalwa zalo mbiko.
UMvikeli woMphakathi wenza lolu phenyo ngemuva kokuba athole izikhalazo ezimbalwa mayelana nenqubo engaqondakali yokuqashwa koNgqongqoshe abathile.
UMncedisi Jonas owayeyiPhini likaNgqongqoshe wezeziMali wacela ukuba kwenziwe uphenyo ngemuva kokuba abizelwe emzini wabakwaGupta lapho atshelwa khona ukuthi uzonikezwa isikhundla sokuba wuNgqongqoshe wezeziMali, ngaleso sikhathi uNgqongqoshe kwakunguNhlanhla Nene.
OLUNYE UDABA: UZuma uthi uzoyisungula ngokushesha ikhomishini uma eyalelwa yinkantolo
UJonas uthi kulo mhlangano kwakukhona nendodana yakaZuma uDududzani.
Esinye isicelo sokuba kuphenywe senziwa wuMmusi Maimane lapho acelakhona uMvikeli woMphakathi ukuba aphenye ubudlelwano bakaMengameli uZuma nalo mndeni.
Esinye isicelo safakwa womunye ogama lakhe ligodliwe lapho kwacelwa khona ukuba uMvikeli woMphakathi aphenye ngokukhishwa kwemisebenzi ezikhungweni ezisebenzisana nohulumeni, i-Eskom nalo mndeni kanye nokuziphatha kukaHulumeni.
Imiphumela yophenyo lwakhe, uMvikeli wpMphakathi uthi yize bungekho ubufakazi balokhu okuvezwe wuJonas noma kufakazelwa yimibiko yabezindaba, kuyamangaza ukuthi kungani umndeni wakwaGupta ube nolwazi ngezinqumo ezizokwenziwa, nokuyizinqumo okumele zenziwe kuphela uMengameli.
Lokhu kuyinkomba yokuthi kwephulwe umthethwo kuthembeka nokungumthetho ofungelwe kulabo abanezikhundla eziphezulu kuhulumeni.
UMvikeli woMphakathi wakhipha isiphakamiso sokuthi uMengameli Zuma kulele aqoke uKhomishana ozophenya kabanzi ngalokhu.
Ijaji okuyilona elizohola lo khomishana kumele liqokwe yiNhloko yamaJaji kanti leli jaji kumele linikezwe amandla okuqhuba lomsebenzi lenze uphenyo olungale kwalolu olwenziwe yihhovisi lakhe.
UMengameli wamajaji uDustin Mlambo, uthi uMvikeli woMphakathi unalo lonke igunya ngokomthetho wehhovisi lakhe lokukhetha izinqumo okumele zenziwe.
Amandla oMvikeli woMphakathi aphuma ngqo kuMthethosisekelo ngakhoke, zonke izingqumo azenzayo kumele zilandelwe njengoba zinjalo.